Author Topic: Bhuwan KC (Read 43295 times)
« on: November 09, 2009, 12:03:02 AM »
अमीर खानका फ्यान भुवन को बिना मरिहाल्दा रै' छन् त ?
नायक भुवन केसीले निर्माण गरेको चौथो चलचित्र 'म तिमी बिना मरिहाल्छु' काठमाण्डौ उपत्यका लगायत बिर्तामोड,धरान, पोखरा,बिराटनगर आदि स्थानहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ । झण्डै पांच वर्षको अन्तराल पछि नायक केसीले ठूलो आशा बोकेर निर्माण गरेको यो चलचित्रको हालसम्मको ब्यावसाय हेदा 'असन्तुष्टि' बढेको समाचार प्राप्त भएको छ । चलचित्रमा शान्ति सर्ेनाथ खटिएको आर्मीको कथा प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्माता स्वयम् लगायत सुस्मिता केसी,झरना थापा र पूजना प्रधान प्रमुख भूमिकामा रहेको यो चलचित्रको स्टीकरहरुमा निर्देशकको नाम राखिएको छैन । पोस्टरहरुमा पनि सानो अक्षरमा निर्देशकको नाम नाम मात्रको राखीएको छ । यो भन्दा अगाडिको उनको चलचित्र 'सुपरस्टार' मा पनि उनले निर्देशक अनिष कोइरालाको नाम राखेका थिएनन् । उक्त कुराले निर्माता भुवन र निर्देशक अनिषबीच चर्काे बिबाद भएको थियो । त्यतिबेला पनि निर्माता भुवनले,'फिल्मको स्क्रीप्ट,लोकेशन, गीत रेकर्डर्ीीकलाकार छनौट लगायतका सम्पर्ूण्ा कामहरु हामी -आफू र आफ्नी कान्छी श्रीमती सुस्मीता) आफैले गर्छर्ाा। मेरो फिल्ममा निर्देशक अन्तिममा मात्र छनौट हुन्छ । त्यसैले हामीले निर्देशकको नाम पनि कहा" राख्ने भन्ने कुरा पनि म आफै निर्णय गर्छु ।' भनेका थिए । यसपटक पनि उनले यससर्न्दर्भमा यही तर्क दोहोर्याए ।
'म तिमी बिना मरिहाल्छु' को स्क्रीप्ट राइटर मा भुवनकी कान्छी सुस्मिताको नाम छ । अब मन नलागी नलागी पनि भन्नै पर्छ, भुवनजी, संसारभरि नै फिल्म निर्देशकको 'प्वाइन्ट अफ भ्यू' मानीन्छ । निर्देशक जस्तो जिम्मेवार क्याप्टेनको नामै गुमनाम हुने गरि अरु निर्देशक लिएर पैसा तिर्नु भन्दा त आफैले निर्देशन गरे भै हाल्छ नि । नत्र श्रीमती सुस्मिता छिन् नि । बलिउडमा पनि नायक अमीर खानले आफै निर्देशक भइ निर्माण गरेको 'तारे जमीन पर' बम्पर हिट भयो । यहां त झन् अमीरको 'ग्रेट फ्यान' । यो भन्दाको अघिको 'करोडपति' अमीर खान अभिनीत 'दिल' बाट उतारियो । 'नेपाली बाबु' अमीरै अभिनीत 'राजा हिन्दुस्तानी' को फोटोकपी गरियो । त्यसपछिको 'सुपरस्टार' त झन् अमीर खानकै अर्काे हिट फिल्म 'रंगीला' बाट नेपालीकरण गरेर फ्लप पनि खाइयो । अहिलेको यो फिल्म चाहि" पक्कै पनि अमिर खान नै अभिनीत 'सर्फोरस' र 'रंग दे बसन्ती' बाट त तानीएको त छैन - यो चाहिं म प्याच्चै भन्न सक्दिनं, किन भने मैले 'म तिमी बिना मरिहाल्छु ' हर्ेन भ्याएको छैन । तर, यो कुरामा चाहि" शंखा गर्ने ठाउं नै छैन, यो फिल्म अमीर खान निमीत,निर्देशीत तथा अभिनीत 'तारे जमीन पर' बाट चाहि" तानीएको छैन । किनभने 'तारे जमीन पर' पर््रदर्शन हु"दा 'म तिमी बिना मरिहाल्छु' को सुटिङ सिद्धिन लागीसकेको थियो । तर, भन्न सकिदैन, नेपालका 'सुपरस्टार' भुवन केसी, 'म तिमी बिना...' बनाउनु भन्दा केही महिना अगाडि एकता कपुरको टेलिसिरीयल 'कसौटी जिन्दगी की' मा हिरो खेल्न मुम्बइ पुगेर अडिसन पनि दिएका थिए । त्यतिबेला उनी अमीर खानकोमा पुगेर 'मै नेपालका सुपरस्टार हिरो हे" । मै आफका जबर्जस्त फ्यान ह"ै । नपत्याए, देखिए आपने खेलाहुवा 'दिल','राजा हिन्दुस्तानी','रंगीला' का मैले नेपालीमा उल्था कर कर नेपाली 'करोडपति', 'नेपाली बाबु' और 'सुपरस्टार' बनाकर बहत पैसे कमाया । सर, मुझे आप की य फिल्मका कहानी जान्नेका मौका दिजीए मै इसको नेपालीमे उल्था करुङ्गा । इसी बहाने मे मै फिर एकबार हिट भी हो जाउङ्गा और थोडाबहुत पैसे भी कमाउङ्गा, प्लीज सर, एक सुपरस्टार ने दुसरा सुपरस्टारको उद्धार किजीए । ' भन्दै 'तारे जमीन पर' को डबिङ, मिक्सीङ हेरेर त्यसको कथा उतारेका पनि हुन सक्छन् । के भर भो र । हैन र -
« Reply #1 on: November 09, 2009, 12:03:35 AM »
बाघ बूढो भए पनि घाँस खाँदैन - भुवन केसी
बेनुप भट्टराई (कान्तिपुर), काठमाण्डौ, २०६६ श्रावण १, बिहिवार
घुँडा 'च्यातिँदै' गरेको टाइट जिन्स लगाएका उनी मोडिफाइ गरिएको चुच्चे डिंगो टक-टक पार्दै सिँढी उक्लिए । औँलामा रातो इउँजडित सुनको औंठी लगाएको दाहिने हातमा दुइटा मोबाइल सेट, टिलिकटिलिक टल्किने सेतो औंठी लगाएको अर्को हातमा २४ क्यारेट सूर्य चुरोटको बट्टा अनि लाइटर ।
सत्ताईस वर्षअघि 'जुनी' फिल्मबाट अभिनय थाल्दा पनि उनी उस्तै टिपटप थिए, यतिका वर्षपछि 'म तिमीबिना मरिहाल्छु' फिल्ममा नायकी देखाउँदा पनि उस्तै लाग्छन् । अर्थात् सदाबहार । उनै भुवन केसी बुधबार सामु थिए । दरबारमार्गस्थित नाङ्लो बेकरीमा भेट हुँदा उनले नाडीमा बाँधेको कालो र्‍याडो घडीले दिउँसोको सवा दुई बजाएको थियो ।
ट्राफिक जामका कारण तोकिएभन्दा आधा घन्टाजति ढिलो चर्को घाममा हतार-हतार आइपुग्दा पनि यी 'जुँगे' नायक चौडा छातीलाई टिमिक्क पार्ने गरी पहिरिएको सेतो टिसर्टमा स्मार्ट देखिन्थे । कालो गगल्सले आँखा झ्याप्पै छोपे पनि मुहारको तेज उस्तै थियो ।
धेरै खाले उतारचढावसँग पौठेजोरी खेल्दै अभिनय यात्राको 'रजत वर्षमा स्वर्ण फिल्म' खेलिसकेका भुवनले गर्न बाँकी कामको फेहरिस्त सुनाउन थाले । 'दसैंको टीकालगत्तै,' अमेरिकाबाट हङकङ हुँदै केही साताअघि फर्किएका उनले भने, 'राष्ट्रभक्ति दर्साउने खालको व्यावसायिक फिल्म बनाउनेछु ।'
जहिलेसुकै हाइफाइ देखिने भुवनले छिनभरमै कफी अर्डर गरे, 'राजा, मिल्क कफी ल्याऊ त ।' अनि संवाददातातिर सोझिए, 'अनेकौं हन्डर र ठक्कर खाँदै बल्ल परिपक्व भएको हुँ । क्यामेरासामु उभिँदैमा केके न गर्छौं भन्दै फुर्ती लाउनेहरू मुर्झाएर गए, म भने सधैँ फक्रिएकै छु ।'
'राम्रो घराना' मा जन्मेका उनले जीवनमा फिल्मी क्षेत्रबाहेक अरूमा लाग्ने सोच्दा पनि सोचेका रहेनछन् । 'दुइटा भाइ पाइलट छन्,' उमेर खोल्नबाट तर्सिने गरे पनि ५० जतिका देखिने उनले सुनाए, 'फिल्ममा नछिरेको भए सायद म हवाईजहाज उडाइरहेको हुन्थें ।' अहिलेको पुस्ताका लागि पुरानो जमानामा हिरो भएका भुवन फिल्मी करिअर 'आफ्नै च्वाइस भएकाले सन्तुष्ट छन् ।'
'फिल्ममा लागेदेखि नै म हाइहाइ हुन्छु भन्ने विश्वास थियो,' रुद्राक्ष मालाको झल्को दिने आकारको पहेंलो मोटो सिक्री लगाएका नायकले चुरोटको धुवाँ उडाए, 'मेहनत र खुबीले गर्दा जे चाहेको त्यो पूरा भइरहेकै छ ।' 'करोडपति,' 'नेपाली बाबु' लगायत गरी पाँच फिल्मका निर्माता यसो भनिरहँदा सन्तोषको सास पनि फेर्दै थिए ।
'जुनी' मा हिरो हुँदा २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक थापेका भुवनलाई समयझैँ कलाकार बदलिन नसक्दा दुःख लागेको छ । 'कुनै बेला मेरो फिल्म सुटिङ हुँदा दर्जनौं प्रहरीले घेरा हालेर सुरक्षा दिन्थे,' उनले सम्भिmए, 'अहिले कलाकार सडकमै हिँड्दा पनि मान्छेले देखेको नदेख्यै गर्छन् ।' यसो हुनुमा कलाकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए र कफी सुरुप्प पारे ।
अस्थिर राजनीतिले हरक्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारे पनि यसलाई मात्र दोष दिन नहुने भुवनको भनाइ थियो । 'सबै कुरा आफू अनुकूल पारेर काम गरौंला भन्नु मुख्र्याइँ हो,' उनको तर्क सान्दर्भिक थियो, 'अप्ठ्यारामा राम्रो गरेर अरूलाई पाठ सिकाउनु राम्रो हो ।' आफूले ठूलो लगानीमा 'अन्योल र अस्थिरता' कै बेला फिल्म बनाएर नाफा कमाएको उनले सम्झाए ।
सरोकारवाला सरकारी निकायले केही 'लछारपाटो' नलाउनाले नेपाली फिल्मको स्तर माथि नउठेको भुवनको दाबी थियो । 'दर्शकको चाहना धेरै माथि उठ्दा पनि फिल्म सुधार्न कुनै सहयोग छैन,' भरखरै हिन्दी 'न्युयोर्क' हेरेर आफ्नो फिल्म त्यस्तै दमदार बनाउने लक्ष्य लिएका उनले भने, 'सरकारले सिने उद्योगलाई चाउचाउ र बियर उद्योगसरहको व्यवहार गर्दा दुःख लाग्छ ।'
टेबलमा राखिएका दुई मोबाइलमा एकपछि अर्को रिङटोन बज्दै थिए । भुवनले दोस्रो चुरोट सल्काउँदै गर्दा कुराकानी फिल्म 'रिमेक' गर्ने प्रसंगमा पुग्दै थियो । 'मान्छेले नयाँ स्वाद खोजिरहेको हुन्छ, त्यसैले रिमेक गनर्ु नराम्रो होइन,' आफू अभिनीत 'कुसुमे रुमाल' रिमेक हुँदै गरेको अवस्थामा उनले फेसनको उदाहरण दिँदै भने, 'तर त्यो पहिलेभन्दा अझ मीठोचाहिँ हुनुपर्छ, नत्र महत्त्व हुँदैन ।'
अरूका व्यावसायिक फिल्म नखेल्ने घोषणै गरेका भुवनसँग छुट्नुअघि विवादास्पद विषय -परिवार, यौन र मदिरा) बारे सोधियो । 'फिल्ममा इतिहास कायम राख्न वर्षौंदेखि संघर्षरत व्यक्तिका अघि यस्ता कुराको अर्थ हुँदैन,' आफूलाई नेपाली परिवेशमा माइकल ज्याक्सन र म्याराडोनासँग तुलना गर्दै झिनामसिना कुरालाई उहिल्यै जितिसकेको दाबीसहित उनी भन्दै थिए, 'बाघ बूढो भए पनि घाँस खाँदैन ।'
« Reply #2 on: November 09, 2009, 12:06:15 AM »
"स्क्याण्डल म जानेर गर्दिनँ, मलाई स्क्याण्डलमा पारिन्छ", भुवन केसीको गुनासो थियो, जब हामी उनको अष्ट्रेलियन एम्बेसी छेउको भव्य महलमा पुग्यौँ । यी ती भुवन केसी हुन्, जो बारबार अखबारका पानामा कि त केटीहरुको मामिलामा उनको नाम जोडिइन्छ या त सिनेमाका बारेमा उनले गर्ने गरेका टिप्पणीका कारण । आउनुहोस्, आजको दिन भुवन केसीलाई भित्रैबाट चिनौँ ।
सिनामंगलमा जन्मिए उनी । बुवा पनि सिनामंगलमा जन्मिएकाले उनी त्यहीँ हुर्किए । न्यू इंगलिस बोर्डिङ स्कूल, जुन अहिले अमर आदर्श स्कूल भयो, त्यहाँ पढ्थे । त्यहाँ म केही वर्षमात्र पढे । त्यहाँ उनका सङ्गीत शिक्षक रनजीत गजमेर थिए । त्यहाँ पढ्दा उनकी सहपाठी थिइन्- भारती गजमेर । जसलाई अझै पनि उनी 'तँ' भन्छन् । उनलाई पछिसम्म थाहा थिएन्, भारतीलाई तुलसी घिमिरेले बिहे गरे ।
सानामा उनी उति धेरै पढ्दैनथे तर फेल पनि हुँदैनथे । उनी पढाइमा एक पटक मात्र फेल भएका थिए, आइए पढ्दा उनलाई राजनीतिशास्त्रमा सोचेभन्दा निकै कम नम्बर आएको थियो । उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट स्नातक गरेका थिए । तर स्कूलदेखि कलेजसम्म उनको सबैभन्दा रुचिको विषय सङ्गीत र खेलकूदलाई कहिल्यै छाडेनन् र त्यसमा अब्बल रहे । शम्भुजीत बासकोटा र भुवन केसी १०/१२ वर्षो उमेरदेखिका साथी हुन् । शम्भुजीत बासकोटाले जीवनमा पहिलो पटक सङ्गीत भरेको गीतमा उनैले गाएका थिए । गीत थियो- मादल बज्यो घिनघिन ताङ तालैमा, पार्छु
कक्षा तीनदेखि ल्याबोरेट्री स्कूल र एमपीएस स्कूलमा पनि पढे । एमपीएसमा पढ्दा वसन्त चौधरी, विनोद चौधरी आफूभन्दा सिनियर थिए । त्यतिञ्जेलसम्म उनले एउटा चर्चित बालगायकका रुपमा प्रख्याति कमाइसकेका थिए ।
आइए पढ्दापढ्दै उनको भागमा 'जागेँ जागेँ सारा रात मायालु आउँछिन् भनेर', 'परेँ म दोधारैमा, जेठी छोडुँ घरबार जान्छ कान्छी छोडुँ माया लाग्छ' जस्ता गीत हिट भइसकेकाले उनी कलेजका स्टार गायक थिए । त्यहीँ उनका साथी थिए, उमेश पाण्डे र रविन शर्मा ।
गीतार बजाउन उनलाई शम्भुजीत बासकोटाले सिकाएका थिए । लोकगायक धर्मराज थापाका छोरा बुलु थापासँग राम्रो गीतार थियो । त्यो गीतार उनले सापटी ल्याएर बजाउँथे । त्रिचन्द्र क्याम्पसको छतमा बसेर खाली समयमा त्यही गीतार बजाइरहेका हुन्थे ।
दिउँसोको खाली समय सदुपयोग गर्न उनले यति ट्राभल्स ज्वाइन गरे । त्यहाँ उनले एउटी यस्ती महिलालाई भेटे, जसले उनको जीवन परिवर्तन गरिदिई । उनलाई पहिलो पटक कसैसँग गम्भीर प्रेम भएको थियो । अरुबेला उनलाई माया गर्नेको कमी थिएन, केटीहरु मरिहत्ते गर्थे, यसबेला उनी त्यो केटीलाई मरिहत्ते गर्ने भए । छ महिने यति ट्राभल्सको कार्यकालमा उनले त्यो श्यामवर्णर्ी तर गम्भीर केटीलाई जीवनसाथी बनाउने निर्ण्र्ागरे । पढे लेखेकी र अंग्रेजीमा राम्रो दखल भएकी ती अरु कोही थिइनन्, भुवनकी पहिलो श्रीमती विजया केसी थिइन् ।
हर्ेदा नै हिरोजस्तो, नयाँ मोटरबाइक, राम्रो डे्रस सेन्सका कारण उनी कलेज र अफिसको आँखाका केन्द्रविन्दु हुने गर्दथे । केही समयपछि नै अखबारमा 'जुनी'का लागि कलाकारको माग आयो । उनले पनि अन्तरवार्ता दिए र नायकमा छनोट भए । हर्ेदा आकर्ष भए पनि अभिनय त उनबाट कोशौँ टाढा थियो । 'जुनी' बनाउने ढिप्पी नायिका मीनाक्षी आनन्दको थियो र मीनाक्षीको ढिप्पीकै कारण बर्म्बईबाट सबै प्राविधिक र निर्देशक आएर सिनेमा तयार भयो । 'जुनी' नै उनको पहिलो अभिनय प्रशिक्षणशाला बन्यो । नायकत्वका केही गुण भुवन आफैँमा थिए तर मीनाक्षीले उनलाई यति टिप्स दिइन्, उनी पछि एउटा राम्रो कलाकार बन्न पुगे ।
'जुनी'को प्राविधिक कार्य हुँदै गर्दा बर्म्बईबाट दुइ चलचित्र बनाउने हल्ला चल्यो । एउटा थियो 'कुसुमे रुमाल' जसलाई तुलसी घिमिरेले निर्माण तथा निर्देशन गर्दै थिए भने शम्भु प्रधानले 'सम्झना' । दुवै चलचित्रका सङ्गीतकार रनजीत गजमेरले भुवन केसीको कलाबारे दुवै निर्माता-निर्देशकलाई जानकारी गराए । यसपछि भुवन केसीको सफल कलायात्रा शुरु भयो ।
उनका यी दुइ चलचित्र हिट के भएका थिए, उनी रातारात 'स्टार' बने । उनको पर्दाभित्र र बाहिर पनि एउटा 'रोमान्टिक' छवि बन्यो । यही रोमान्टिक छविका कारण पनि उनी आजपर्यन्त चर्चामा बरोबर आइरहन्छन् ।
'सम्झना र कुसुमे रुमाल नबनेको भए, नेपाली चलचित्र उद्योग नै बन्दैनथ्यो । चलचित्र संस्थानले दुइ तीन वर्षा एउटा सिनेमा मात्र बनाउने चलन थियो । त्यो पनि आफ्ना मान्छेलाई कलाकार बनाउने चलन थियो भने कर्मचारीका लागि टीएडीए खाने भाँडो मात्र थियो', आफूले खेलेका चलचित्रको महत्व केलाउँदै भुवन केसी थप्छन्- 'निजी क्षेत्रले बनाएको चलचित्र पनि चल्छ भन्ने उदाहरण बन्यो । यो उदाहरणले निजी क्षेत्रका निर्माताले बनाउन सकिन्छ भन्ने मानक बनायो ।'
"नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष पटकथा हो । यहाँ राम्रा पटकथाकारको ज्यादै अभाव छ । नत्र त राम्रा कलाकारको कुनै अभाव छैन । मात्र तिनको प्रतिभालाई राम्रोसँग बाहिर ल्याउन सक्ने सक्षम निर्देशक र पटकथाकार चाहिएको छ," भुवन यतिबेला आफ्ना पुराना दिन सम्झँदै भन्छन् ।
महादेवीको 'सागरको गहिरो...' गीतअघिको एउटा दृश्यमा उनले करिश्मालाई ओठमा गर्ने चुम्बनका कारण निर्देशक नारायण पुरीले कुटाइ खानु पर्‍यो । तर यो कुरामा भुवन अहिले त्यो घटना सम्झँदा अचम्ममा पर्छन् ।
"करिश्माजीलाई थाहा थियो, मलाई हिरोले आएर किस गर्छ । निर्देशकले मलाई पनि किस गर्ने भन्नु भएको हो । मैले पहिलो पटक करिश्माजीलाई किस गरेँ तर निर्देशकले त्यो सिनलाई पटक पटक रिटेक गरे । पछि करिश्माजीले उहाँलाई पिट्नु भएको थियो । किन उहाँले निर्देशकलाई पिट्नु भयो, किन स्क्याण्डल भयो त्यो अझै पनि मलाई थाहा छैन", भुवन केसीको स्पष्टोक्ति छ ।
अहिले उनी सम्झन्छन्- "किनभने मै बढी लोकप्रिय थिएँ, त्यही भएर मेरो बढी हल्ला फिँजिन्थ्यो । स्क्याण्डल नभएको कुरालाई बढी चर्चा गर्दा मात्र हुन्छ । मलाई मतलबै नभएको कुरामा स्क्याण्डलमा भएको हुन्छ । मेरो आफ्नो पत्रिका भएको भए पो मलाई फाइदा हुन्थ्यो ! त्यसैले कतिपयले भुवन बढी हल्ला गर्छ भन्ने कुरा सत्यतामा आधारित छैन ।"
उनको कतिपय केटी साथीहरु छन्, तिनसँगको नजिकपनालाई सेक्ससँग गाँसेर बढी हल्ला गरिएको उनको आरोप छ । तर नजिकपना र सेक्स अलग रहेको उनको धारणा छ । "नजिक त म तपाइँसँग पनि छु अब तपाइँसँग पनि मेरो नाम जोडिदिने -" भुवन ठट्टा गर्न चुक्दैनन् ।
कतिपयले सिनेमा खेल्न नपाएर हल्ला चलाएको आरोपमा भने उनको भनाइ छ- "मैले सिनेमा नपाएकोले आफैँले हल्ला गर्दै हिँडेको कुरामा अलिकति पनि सत्यता किन छैन भने म आफैँ वर्षा दुइटा फिल्म बनाउन सक्ने सक्षम व्यक्ति हुँ । त्यसैले एड्स लाग्यो भन्ने हल्ला, कसले कसरी र कुन नियतले गर्‍यो भन्ने कुरा वास्तवमै खोज्नुपर्ने कुरा हो ।"
तीनपाते चियाको मोडलिङका बेलामा दार्जिलिङबाट नेपाल आएकी सुस्मिता गौतमसँग नजिकिएपछि भुवन झनै विवादित बने । किनभने सुस्मिता भुवनकी दोस्री श्रीमती बन्न पुगिन् । भुवन भन्छन्- "मान्छेको जीवन प्रेम गर्नका लागि एउटा मात्र जुनी काफी छैन । मानिसलाई हरेक पटक प्रेम हुनसक्छ । पटक-पटक प्रेम हुनसक्छ । त्यसैले मैले सुस्मितालाई बिहे गरेँ ।" तर सुपरस्टार बन्ने बित्तिकै उनको वैवाहिक जीवन अन्य पुरुषसँगको सम्बन्ध जोडिएपछि झन्नै समाप्त भइसकेको थियो । त्यसमा सुस्मिताले भुवन केसीलाई पारपाचुके गर्नेसमेत घटना घट्यो । त्यसलाई भुवन अहिले नराम्रो दिन भनेर भुल्न चाहन्छन् ।
अरु त अरु उनको विवाद 'सुपरस्टार' का निर्देशक भुवन केसीसँग पनि भयो । अनीष कोइरालालाई अन्तिम अवस्थामा निर्देशकबाट निकालेर प्राविधिक कार्य आफैँ सम्पन्न गरेका थिए । अहिले अनीषसँगका विवादित ती दिनहरु सम्झँदा उनी भन्छन्- "सिनेमा राम्रो होस् भन्ने हिसाबले ती काम भएका थिए । अहिले उहाँसँग त्यस्तो वैरभाव कुनै छैनन् ।"
हरेक फिल्ममा केही न केही सानातिना घटनाहरु भइरहन्छन्, यो अलग कुरा हो केही व्यक्तिहरु बोल्दै नबोली चूप लागेर बस्छन् । तर भुवन पत्रकार आयो भनेर 'म्याटर दिन' कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । त्यही भएर नै होला, उनका कुराहरु बढी अखबारमा आइरहेका हुन्छन् । र, पत्रकारका लागि त्यो स्क्याण्डल बन्ने गरेका हुन् । त्यसै पनि भुवन स्क्याण्डलका विरोधी पनि होइनन् नि !
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै धेरैभन्दा धेरै निजी क्षेत्रका चलचित्र बन्ने वातावरण बन्यो । जसमा निर्माताहरुलाई ६५ प्रतिशत कर फिर्ता दिनेलगायतका अन्य धेरै प्रावधानहरुको भूमिका थियो । तर यो प्रावधानले तानिएका केही निर्माताहरुले आकर्षाहीन सिनेमा बनाउन थाल्नाले चलचित्र चलेनन् मात्र होइन केहीले त आत्महत्यासमेत गरे । यसपछि चलचित्र निर्माणमा शिथिलता देखा पर्न थाल्यो । यही बेला भुवनले आफ्नो घरेलु निर्माण संस्थाबाट 'करोडपति' बनाए । सिनेमालाई कसरी बनाउनुपर्छ र कसरी बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचका भुवनको त्यो चलचित्रले उनलाई वास्तविक रुपमा करोडपति बनाइदियो ।
"कलाकार भएर कुनै चलचित्रमा काम र्गर्दा कथा चल्दैन भन्ने थाहा हुन्थ्यो । तर खेल्थेँ किनभने परिवार पाल्नु मेरो बाध्यता थियो । फिल्म यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचअनुसार 'सपना' बनाएको थिएँ", सिनेमा निर्माणमा लाग्नुको कारण खोतल्दै उनले बताए- "सपनापछि पाँच वर्षमैले सिनेमा बनाउन पाइनँ, किनभने सिनेमा खेल्न नै म व्यस्त थिएँ ।"
करोडपति चल्नुअघि कतिपय सिनेमाहरु हाइभिजन हलहरुमा चल्थे । ट्रक ड्राइभरबाट यो चलनको शुरुवात भएको थियो । ठूला हलको भाडा नै यति धेरै थियो कि कतिपय निर्माताले त घरबाट तिर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसैले ठूला हलमा सिनेमा चलाउन डराइरहेको बेला भुवन केसीले करोडपति हाइभिजनभन्दा पनि ठूलै हलमा पर््रदर्शन शुरु गरेका थिए । त्यो सिनेमाले उनलाई एउटा राम्रो निर्माताको रुपमा ख्याति दिलायो ।
देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष, हामी नेपालीजस्ता राष्ट्रप्रेमको विषयमा गीत र कार्यक्रम निकै कम बज्ने गरेका छन् । निकै कम बन्ने गरेका छन् । त्यही कमी महसूस गरेका भुवनले दोस्रो सिनेमा बनाउने निर्ण्र्ाागरेका थिए । यो सिनेमाले पनि उनलाई फाइदा नै दियो । तर तेस्रो सिनेमा 'सुपरस्टार' भने राम्रो चलेन । भुवन भन्छन्- 'त्यो मेरो फल्ट होइन । यदि मैले त्यो उपत्यकाबाहिर चलाएको भए ७५ लाखबढी कमाउँथेँ होला ।
"सिनेमा बनाउने कुरा जोक् होइन", भुवन भन्छन्- "सिनेमा बनाउन दिल दिमाग र तपाइँको धेरैभन्दा धेरै समय लाग्छ । म हुलमुलमा सिनेमा बनाउँदिनँ । तर म दुइ महिनामा एउटा सिनेमा बनाउन सक्छु । म त्यसो किन गर्दिनँ भने सिनेमा बनाइसकेपछि त्यसको बढीभन्दा बढी असल पक्षलाई प्रचार गरेर दर्शकलाई हलसम्म ल्याउँछु । त्यो क्षमता मसँग छ ।"
सपना चलचित्र निर्माणताका बुवासँग साना विवादलाई प्रेसले ठूलो बनाएको मात्र हो । मुख्य कुरा त के हो भने जसको घरमा पनि सानातिना विवाद भइहाल्छन् । बुवा र मबीच भएको साना विवादलाई प्रेसले झगडाको रुप दिएको थियो ।
आम् द बेस्ट
"दुनियाँ, मानिस, चोर सिपाहीजस्ता सिनेमा तपाइँ हेर्नुस्, त्यसमा मेरो भूमिका हेर्नुस्, तपाइँले मेरो भूमिका र चरित्र उत्तम पाउनु हुनेछ । किनभने म अरुभन्दा राम्रो कलाकार छु । त्यसैले यत्तिका वर्षम्म पनि म उद्योगमा टिकेको छु । यदि म अरु कलाकारजस्तो अतिथि भूमिकामा समेत देखिन थालेँ भने नयाँ कलाकारले चान्स नै पाउँदैनन् । कम पैसामा फिल्म खेल्न थालेँ भने अरुको चान्स नै छैन । त्यसैले मेरो पारिश्रमिक र भूमिकाप्रति चनाखो छु", उनको स्पष्टोक्ति छ । जिद्दी र बाबुसाहेबजस्तो चलचित्रमा उनले हालसम्मकै बढी पारिश्रमिक लिएका छन् । उनको भनाइअनुसार ती चलचित्रमा उनले साढे चार लाख रुपियाँ लिएका थिए भने पछिल्ला चलचित्रहरु दुनियाँ र मानिसमा उनले साढे तीन लाख रुपियाँ लिएका थिए ।
उनी झारेझूरे निर्देशकसँग काम गर्दैनन् । निर्देशकको छनोट, कथावस्तु दह्रो र कथावस्तुमा भूमिकाको बलियोपना नै उनले चलचित्र छनोटको पहिलो रोजाई हो । यस्तो रोजाइ भएका कारण उनी अरुजस्तो हरेक तेस्रो सिनेमामा देखिदैनन् । त्यसैले उनी अरुभन्दा फरक छु भनेर प्रमाणित गर्न खोज्छन् ।
सिनेमामा अभिनय र निर्माण नै उनको भविष्य हो । यसबाहेक अरु केही कुरा उनी सोच्न सक्तैनन् । निकट भविष्यमा दुइ वटा चलचित्र शुरु गर्न लागेका उनलाई ती दुइ चलचित्रको विषयले दर्शकहरुको मनमस्तिष्कमा घर बनाउने कुरामा विश्वस्त छन् ।
« Reply #3 on: November 09, 2009, 12:12:10 AM »
गोजी रित्तिएपछि फिल्म निर्माणमा लागे भुवन
पाँचवर्षको अन्तरालमा फिल्म बनाउने निर्यातका रुपमा परिचित छन्, भुवन केसी। यसपटक पने नयाँ फिल्म बनाएको एकवर्ष नबित्दै उनी अर्को फिल्म निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। निर्देशक शोभित बस्नेतलाई नयाँ फिल्मको निर्देशक बनाउने घोषणा उनले गरेका थिए। तर त्यो घोषणा तोडेर उनले आफ्नै श्रीमती सुष्मिता केसीलाई निर्देशक बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। जब पैसाको अभाव पर्छ तब भुवन केसी फिल्म बनाउँछन्। आफूले बनाएको फिल्म दुनियाँतिर ढोल पिटेर भए पनि त्यसलाई चर्चामा ल्याउँछन्। यसैगरी ढोल पिटेर फिल्म "म तिमीबिना मरिहाल्छु" लाई उनले सफल बनाएका हुन्।
एउटा फिल्मले कमाएको पैसाले उनलाई विगतमा चार/पाँच वर्ष क्यासिनो जान पुग्थ्यो। पछिल्ल्ाोपटक फिल्म सुपरस्टार बनाएर घाटा सहेका भुवन पछिल्लो समय निकै ऋणमा डुबेका थिए। सो ऋण यसपटक उनले 145म तिमीबिना मरिहाल्छु146को कमाइले तिरेका हुन्। बेलायत र अमेरिका पठाइदिने नाममा उनले थुप्रैसंग पैसा लिएका थिए। उनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगारमा उजुरी पनि नपरेको होइन। विदेश पठाइदिन्छु भनेर उनले लिएका पैसा चुक्ता गरेका छन्। भुवनबाट आफूले विदेश जान दिएको रकम पाएको कास्कीका एकजना व्यक्तिले देशान्तरलाई बताए।
यसरी आफ्ना पुराना ऋण तिरेर ऋणमुक्त भएका भुवन अहिले नयाँ फिल्मको निर्माणमा जुटेका छन्। कमाएको पैसा ऋण चुक्ता गर्दैमा सकिएकाले नयाँ फिल्मको निर्माणमा उनी जुटेका हुन्। यी नायकले आगामी नयाँ वर्षबाट नयाँ फिल्मको निर्माण शुरु गर्ने भएका छन्। यसपछि पत्रकारबाट निकै सहयोग पाएका भुवन केसी अहिले भने पत्रकारबाट आलोचित भएका छन्। सभा समारोहमा पत्रकार कुट्छु भन्दै भाषण गरेर हिंड्ने नायक केसीसँग यहीकारण धेरै पत्रकार रुष्ट छन्। पानीमा बसेर गोहीसंग जोरी खोज्नु राम्रो होइन भनेर भुवनले कहिले बुझ्ने हुन्? त्यो हेर्न बाँकी छ।
« Reply #4 on: November 09, 2009, 12:15:10 AM »
सेक्सबारे नो टेन्सन -भुवन केसी , नायक
भुवन केसी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एभरग्रीन नायकका रुपमा परिचित छन् । सधै कुनै न कुनै विवादमा तानिने भुवन चर्चाकै लागि विवाद ल्याउछन् भन्ने गरिन्छ । उमेरले ५० काटेपनि भुवन सदावहार देखिन्छन् र भन्छन् उमेरमा भन्दा योगदानमा महत्व दिनुहोस् । उनीसंग समसामयिक विषयमा नेपालयूकेका लागि दीपेश केसीले गर्नुभएको कुराकानी ः
भुवनजी के गर्दैहुनुहुन्छ ?
नयां फिल्म बनाउने तरखरमा छु । अप्रिलसम्मा नाम जुछ र सुटिड. शुरु गर्छु त्यसबाहेक म तिमी विना मरिहाल्छु को प्रदर्शनका लागि अमेरिका जाने तयारीमा छु ।
तपाई कहिलेबाट सन्यास लिनुहुन्छ ?
सन्यासको कुरा नगर्नुहोस् । म अभिनयमै जीवन दिन्छु ।
तपाईं यो उमेरमा पनि भर्खरका नायिकासंग फिल्म खेल्नुहुन्छ, असजिलो लाग्दैन ?
उमेरको कुरा नगर्नुहोस् । बरु भूमिकाको कुरा गर्नुहोस् । मलाई नवनायिकासंग होस् या पुरानानै किन नहोस् आफूलाई फिट बनाउनसक्छु भन्नेमा विश्वास छ ।
तपाई सदाबहार रहनुको रहस्य के हो ?
म अनावश्यक टेन्सन लिन्न । जीवनमा आउने सबै आरोह अवरोहलाई स्वाभाविक रुपमा लिन्छु । म भन्छु नो टेन्सन इन लाइफ ।
सुन्दर देखिन खाना र एक्सरसाइजमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ?
म खानामा बार्दिन । चिल्लो, पीरो केही भन्दिन । म रक्सी पनि खान्छु र चुरोट पनि पिउंछु । विना टेन्सन बांचिरहेको छु । म स्वस्थ रहनुको कारण पनि टेन्सनरहित जीवननै हो । वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खान्छ । टेन्सन लिनु हुदैन ।
विहान कत्ति बजे उठ्नुहुन्छ ?
यत्तिनै भन्ने छैन । पांच पनि बज्छ कहिले दश पनि बज्छ ।
तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हो ?
मलाई संगित सुन्न मनलाग्छ । समयअनुसार आधुनिक, पप र लोकगित सुन्छु ।
तपाईंको उमेर कति हो ?
उमेर भन्ने कुरा वर्षर महिनामा गनिने विषय होइन । लेख्नुहुन्छ भने १७ सेप्टेम्बरको जन्म हो भनेर लेख्नुहोस् । मान्छेको आनीबानी र व्यक्तित्व हेरेर त्यसको निक्र्यौल हुनर्ुपर्छ । मेरो उमेरभन्दा पनि यो कुरा मान्नुहोस् कि राजनीतिमा लागेको भए मन्त्री, आर्मीमा लागेको भए जर्नेल र प्रहरीमा लागेको भए डिआइजी हुन्थें ।
सेक्सलाई जीवनको एक उपहार हो । यो स्वाभाविक हो र यसलाई अनावश्यक चर्चा र चासोको विषय नठान्नुहोस् । सेक्स स्वाभाविक हो भने यसमा अल्झनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । सेक्सबारे बढी चासो किन दिइन्छ - किन हाइलाइट गरिन्छ ? सेक्सबारे टेन्सन लिनुहुदैन, इजिलि लिदा राम्रो हुन्छ । संसारकै आवश्यक विषय भएपछि यसमा अल्भिmरहनुको कुनै औचित्य रहदैन ।
अन्तमा, तपाईंलाई कुनै टेन्सननै छैन त ?
अहं, म टेन्सन लिन्न । स्वस्थ रहनका लागि टेन्सन प्रिm हुनर्ुपर्छ । टेन्सन लिएर फाइदा केही नहुने बरु बेफाइदा नै बढी छ । जीवनका कुनैपनि घटनाक्रमलाई स्वाभाविक मान्दै आत्मबलका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छन् । नेतालाई कुर्सर्ीीाने टेन्सन, कसैलाई पैसा डुब्ने टेन्सन त कसैलाई के टेन्सन, मलाई नो टेन्सन । नो टेन्सन नो डिजिज ।
« Reply #5 on: December 01, 2009, 11:08:43 AM »
My hatest actor!!
« Reply #6 on: January 24, 2010, 11:52:03 AM »
भुवनको वैवाहिक जीवन असफल
सदावहार नायक भुवन केसीले हालै एक अन्तर्वातामा आफ्नो वैवाहिक जीवन असफल भएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । अभिनेता केसीले भनेका छन्- मैले दुईवटा विवाह गरे, एउटा लभ र अर्को एरेञ्ज । दुर्भाग्य भनौं वा के भनौं दुवै विवाह सफल भएनन् । यसैक्रममा केसीले अहिले आफूले तेस्रो विवाह गर्ने विषयमा केही नसोचेको पनि बताएका छन् ।
यद्यपि यी लोकपि्रय नायकले आफ्ना श्रीमतीहरूसँग बेस्ट फ्रेण्डका रूपमा राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबी भने गरेका छन् । केसी भन्छन्- त्यही आधारमा कहिलेकाहीँ सँगै काम पनि गरिन्छ । श्रीमतीहरूसँग अलग भए पनि छोराछोरीहरू भने केसीसँगै छन् । भुवनकी जेठी श्रीमतीबाट छोरी काजल र छोरा विवेक दुईजना तथा कान्छी श्रीमतीबाट छोरा अनमोल गरी तीन सन्तान छन् ।
« Reply #7 on: March 10, 2010, 11:47:44 PM »
चलचित्रको प्रचार प्रसारमा भुवन
सुमन गैरे, काठमाण्डौ, २०६६ फाल्गुन २५, मंगलवार
चलचित्र निर्माण गर्नु मात्र ठूलो कुरा हैन । चलचित्रलाई प्रचार प्रसार गरेर चर्चामा ल्याउन जान्नु पनि ठूलो कुरा हो । नेपाली सिने जगतमा केहि मात्र यस्ता व्यक्ति छन् जसले चलचित्र निर्माण मात्र हैन प्रचार प्रसार पनि गर्न राम्रो सँग जानेका छन् । तिनै व्यक्तिहरू मध्ये एक हुन नायक तथा निर्माता भुवन केसी ।
भुवनलाई चलचित्र निर्माण गर्ने तरिका मात्र हैन त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने राम्रो ज्ञान समेत छ । यहि कारणले पनि उनका हरेक चलचित्रहरू सफल हुने गरेका छन् । प्रसङ्ग हो निर्माणाधिन चलचित्र 'साथी म तिम्रो' को । गत सोमबार राजधानीको गोपीकृष्ण हलमा नायक भुवन केसीले आफूले निर्माण गर्दै गरेको पछिल्लो चलचित्र 'साथी म तिम्रो' को क्लाईमेक्स सिनको छायाँकन गरिरहेका थिए तर रङगीचङगी तोरणले चारैतिर सजाइएको हल परिसरमा चलचित्र 'साथी म तिम्रो' को ब्यानर राखिएकोले दर्शकहरू त एकछिन् झुक्किए पनि । केही दर्शकहरूले त चलचित्र 'साथी म तिम्रो' प्रदर्शन भईरहेको रहेछ समेत भन्न भ्याए । हल परिसरमा मानिसहरू निकै भिड रहेको केही दर्शकहरूले त टिकट काट्नेको निकै भिड रहेको अड्कल पनि काटे ।
काजल फिल्मको प्रस्तुति 'साथी म तिम्रो' ले सय दिन मनाएको ब्यानर देखेपछि नामै नसुनेको चलचित्रले कसरी सय दिन मनायो भनेर प्रश्न गर्ने दर्शकहरू पनि नभएका हैनन् तर नायक भुवनले टाँसेका ति पोस्टरहरूमा निर्देशक, निर्माता तथा अन्य चलचित्रकर्मीहरूको नाम नदेखेपछी आफूहरू भ्रममा परेको थाहा पाए । मैले त धन्नै टिकट काउन्टरमा गएर 'साथी म तिम्रो' को टिकट मागिन्', हिन्दी चलचित्र हेर्न हल पुगेकी एक महिलाले भनिन्, 'हिन्दी चलचित्र हेर्न आएको भएपनि १०० दिन मनाएको चलचित्रको पोस्टर देखेपछि यहि चलचित्र हेर्छु भनेर मनस्थिती बनाई सकेकी थिएँ तर पछी सुटिङको लागी टाँसेको भन्ने थाहा पाएपछी चलचित्र नहेरी त्यही भुवन केसी र रेखा थापाको सुटिङ हेर्न थालें।'
यता नायक भुवनले दर्शक झुक्याउने आफ्नो मनसाय नभएर चलचित्रको कथा भित्र आफूले निर्माण गरेको चलचित्रले १०० दिन मनाएको खुसीमा दर्शकको भिडमा आफ्नो खुसी साट्ने सिनको छायाँकन गरेको बताए । चलचित्र भित्र 'साथी म तिम्रो' मा निर्माताको भूमिका गरेका भुवनले आफ्नो चलचित्र सफल भएपछि आफू हलबाट बाहिरिँदै गरेको भूमिकामा उनलाई भीडले उचाल्दै गरेको सिन खिच्न दर्शकको भिड रहेकोले पनि दर्शकहरू झुक्किएको भुवनले बताए ।
परिसरमा दर्शकरूको भीडले भुवनलाई उचाल्नु पर्ने, ताली बजाउनु पर्ने, दृश्य भएकोले भुवनले चलचित्र हेर्न आएका थुप्रै दर्शकरूलाई उक्त दृश्यको लागी प्रयोग गरेका थिए । दर्शकहरू पनि चलचित्रमा आफ्नो अनुहार देखिने रहरले चलचित्र नै नहेरी त्यही भिडमा रमाएका थिए । यो त भयो दर्शकहरू समक्ष भुवनको नयाँ चलचित्रको प्रचार प्रसार गर्ने नयाँ शैली ।
भुवनले आफ्नो चलचित्रलाई सञ्चारमाध्यममा ल्याउन चलचित्र भित्र केही पत्रकारहरूको अनुहार समेत कैद गरे । 'साथी म तिम्रो' सुपरहिट भएपछि हलबाट कार चढेर निस्किएका भुवन र रेखाको अन्तर्वार्ता लिनु पर्ने दृश्यमा उनले पत्रकारहरूलाई प्रयोग गरेका हुन् ।
वाह ! नायक भुवन केसीको दिमागलाई पनि मान्नै पर्छ ।
« Reply #8 on: April 01, 2015, 04:22:36 AM »
भुवन केसीको नायिकासंगको ओछ्यान कहानी सहितको आत्मकथा
नेपालमा पछिल्लो समय आख्यान लेख्ने क्रम बढेको छ । आफूलाई उपन्यासकारका रुपमा अब्बल लेखक बनाउने होडमा सबै लागेका छन् । यही क्रममा नेपाली सिनेमाका नेपालीबाबु सदावहार नायक भुवन केसी र चपली गर्लका रुपमा स्थापित भएर चलचित्र नपाएपछि खेतीकिसानी सेलिब्रेटी बेनका विनिता बराल पनि थपिँदै छन् । बुधबारको जनआस्थाका अनुसार, भुवन केसी पनि आफ्नो आत्मकथा बाहिर ल्याउने तयारीमा छन् । किताबमा समेटिएको छ, रुपा रानादेखि थरी–थरीका नायिकासँग ओछयानसम्मको कहानी । एउटी नायिकाका आमाछोरीसँग रोमान्सको कहानी छँदै छ । थरी–थरी नायिकासँगको रोमान्सलाई समेटेर पुस्तक तयार भएपछि घोस्टराइटिङका कमल ढकालले पुस्तकको नाम ‘प्ले ब्वाई’ राख्न खोजे । छाप्नेको ध्यान किताब कसरी हुन्छ बिकाउनु छ त्यही थियो ध्येय । यही पछि हो, भुवन केसीले रोइकराइ गर्न थालेको । भुवनले यो नाम हुँदैहुँदैन भन्ने अड्डी कसेपछि नाम परिवर्तन भएर ‘सुपरस्टार’ राखिएको छ । यही पछि हो कमलले साथीसर्कलमा भुवन केसीले पुस्तकको नाम प्ले ब्वाय राख्न नमानेको चर्चा गर्दै हिँडेको । २१ चैतसम्ममा निकाल्ने तयारीसाथ काम भइरहेको पुस्तक प्रेसमा गइसकेको छ । यससम्बन्धमा केसीसँग जिज्ञासा राख्दा भन्दै थिए, ‘कुन बेबकुफले हल्ला चलायो यस्तो ?’ यस्तै, अभिनय गरेका चलचित्रको पोस्टर मात्रै चल्ने र चलचित्र नचल्ने भएपछि कलाकार हैरान छन् । यसैले कृषि कर्ममा लागेकी नायिका विनिता बराल यतिखेर उपन्यासकार बन्ने लहडमा छिन् । नेपालमा उपन्यासकार बन्न गाह्रो छैन पनि । भाडाका लेखक पाइहालिन्छ । तिनैको प्रयोगमा पुस्तक एउटाले लेखिदियो, न्वारान अर्कैले गरिदियो । पुस्तकको कभरमा नाम छापिँदै छ विनिता बरालको । उनको किताव वैशाखसम्म बजारमा ल्याउने तयारीसाथ फाइन प्रिन्टले छाप्दै छ । उनले लेखेको पाण्डुलिपि हेरेका एक साहित्यकार भन्छन्, ‘उपन्यासको बाहिरी पानामा नाम मात्रै उनको हो, उपन्यास लेखिदिने कुनै फिल्म निर्देशक ।’ चपली हाइटले चर्चाको शिखरमा पु¥यायो । यसपछिका फुलस्टपसँगै उनको फिल्मी करिअरमा समेत फुलस्टप नै लाग्यो । सुपरहिट चलचित्रमा काम गर्दै गर्दा विनिताको दिल निर्देशक निरञ्जन पाण्डेसँग साटियो । टोखामा १० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर निरञ्जन पाण्डे, श्रीकृष्ण अधिकारी, कृष्ण न्यौपानेको सहकार्यमा कृषि कर्म गर्न लागिन् । उनै निरञ्जनसँग डेढ वर्षदेखि लिभिङ टुगेदरमा रहेकी छन् । अहिले यो जोडी टोखामा रहेको ग्रिनसिटी अस्पतालनजिकै बस्छ । यससम्बन्धका बारेमा सोध्दा बरालले ‘निरञ्जन आफ्नो प्रेमी भए पनि लिभिङ टुगेदरमा नरहेको’ बताइन् । भन्छिन्, ‘भर्खर त जुइनोको गाँठो खोल्न खोज्दै छु, लगनगाँठो त्यसपछाडि मात्र कस्ने सोच छ, ‘तत्काल विवाह नगरेकोबारे अर्का तर्क छ, ‘मास्टर्स सकिएको छैन ।’
« Reply #9 on: April 04, 2015, 04:45:29 AM »
Delayed --> http://xnepali.net/movies/bhuwan-kc-biography-delayed/